Ny totozy totozy ao anaty tavoahangy
Maro ny ankizivavy masiaka mandà ny mofomamy , satria matetika no misy menaka avy aminy. Ity fotoana ity dia mora ny mametraka amin'ny alàlan'ny fanosehana azy amin'ny tady. Miaraka amin'io sakafo io, ny mofomamy rehetra, misaotra ny fatorana, dia mitoetra ao anatiny, ary ny lovia dia mihamatanjaka sy mahafinaritra fotsiny. Ny tetezan-tsindrona dia azo alaina alohan'ny hanina amin'ny zava-manitra, ary afaka miady avy hatrany ianao, ary miala avy hatrany. Safidy maromaro momba ny fanaovana akoho ny akoho ao anaty siramamy ao anaty lasitra fanosotra no atolotra etsy ambany.
Mametafeta kobam-bôly ao anaty vilany mangotraka
kiran'ny sipa - 450 g;
fanangonam-bozaka landy - hanandrana;
Ho an'ny matory:
atody amin'ny akoho - 2 tapitrisa;
siramamy na mayonnaise - 2 tbsp. lovia kely;
varimbazaha mena - 4 tbsp. lovia kely;
Voasary ny sinim-baton-tsakafo, vita maina ary tapihina any amin'ny takelaka lava-patana. Samy nandositra izy ireo tamin'ny fanampian'ny mpitrandraka lakozia iray, mandrakotra ny sarimihetsika sakafo. Ankehitriny kely kely prisalivaem sy ny vanin-taona misy fonosana.
Mangetaheta sira ny atody, ampio siramamy na mayonnaise ary mifangaro. Manampy kobam-bary kely sy mampihetsi-po, manatsara ny tsy fitovizan-tsakafo ho toy ny pancake. Tokony ho ny homamiadana ny masony ary tsy misy vongan-dranomandry.
Ny sombin-tsakafo voaomana rehetra dia natsipy tao anaty kapoka ary napetraka tao anaty vilany iray fanosotra tao anaty vilany. Afangaro ny dimy ka hatramin'ny fito minitra amin'ny andaniny roa amin'ny afo mafana. Ruddy aroso araraka dia vonona.
Ny tsindrin-tsakafo dia mahandro amin'ny ranom-boasary sy ny menaka
Tranon'ny akoho hena - 550 g;
tsaramaso mafy piquant - 100 g;
atody amin'ny akoho - 3 tapitrisa;
mayonnaise - 3 tbsp. lovia kely;
vary mena - 6-8 tbsp. lovia kely;
Ny kofehy mofomamy mofomamy sy mofomamy dia tapaka ao anaty sombin-javatra maromaro ary nokapohina tamin'ny mpangalatra lakozia. Mba tsy hikorontana sy hitapatapahaka bebe kokoa ny hena, dia rakofantsika izany alohan'ny handehanana amin'ny sarimihetsika sakafo.
Mangetaheta sira ny zezika, atsangano ny mayonnaise ary mifangaro. Mandeha ao anaty lafarinina isika ary manapaka izany amin'ny homogeneity amin'ny whisk or mixer iray. Ny tsy fitovizan-tsakafon-tsakafo efa nomanina dia tokony hitovitovy amin'ny test de pancake.
Mandalo ny entona mavesatra isika amin'ny alàlan'ny lavaka ary manisy izany amin'ny vilia iray.
Ny siramamy tsirairay dia mipoitra ary mipetaka amin'ny voankazo misy menaka. Avy eo dia atsofinay amin'ny ilany iray ilay izy ary atsipazo eo ambony roapolo misy menaka misy menaka. Top miaraka amin'ny tsaramaso mena sy ny fonosam-paty miaraka amin'ny tapa-batom-bolo mba hifehezana tanteraka ny fono. Rehefa manondraka avy eny amin'ny farany ambany ny loko, dia arotsakao tsara izy io amin'ny lafiny iray ary mijoro mandra-pahavitany.
Manoro hevitra anao izahay hitsapana ny tratrako amin'ny labiera. Ny bobongolo vita amin'ny biriky dia mampihetsi-po sy manjelanjelatra, mitovy loko ny sakafo, ary tsy mahatsapa velively ny tsiron'ny labiera. Ahoana ny fomba hametrahana labiera mofomamy ho an'ny nono akoho, vakio etsy ambany ao amin'ny soso-kevitrao.
Ny totozy totozy ao anaty labiera mena ao anaty vilany
beer - 300 ml;
menaka voly - 35 ml;
varimbazaha mena - 250-300 g;
Ny kofehy mofomamy mofomamy sy mofomamy dia zaraina ho drakitra iray santimetatra eo ho eo ary hikapoka miaraka amin'ny lakozia mpangotraka, mandrakotra ny sarimihetsika. Avy eo prisalivaem, mipetraha miaraka amin'ny menaka misy menaka ary miala folo minitra.
Mandritra izany, kitapo ny atody amin'ny sira, ampiasao labiera, menaka voajanahary, voanio kafitofa varim-bazaha ary mifangaro mandra-pahatongan'ny homogenous ary mialà balsônes.
Ao anaty menaka no manondraka ny menaka voajanahary ary mamafana azy tsara. Ny sombin-tsakafo tsirairay dia natsipy tao an-kibony avy amin'ny andaniny roa ary napetraka tao anaty fonosana iray. Mofomamy mandra-pahavaratra ary vonona.
Sakafo ao anaty divay
Ahoana no hikolokolo ziaka amin'ny menaka fanosotra?
Shrimp amin'ny saosy kanto
Julien amin'ny tortlets
Salady miaraka amin'ny ronono sy angom-boankazo voangona
Kitapo miaraka amin'ny laisoa sy henintsoa
Rake plat cakes
Pasta miaraka amin'ny salmon ao anaty saosy sotro
Karazana karaoty - fanaka
Sakafo gera - Recipe
Kitapo miaraka amin'ny trondro sy vary - mahasalama mahasalama ho an'ny fitsapam-pahaizana mahomby sy ny fitsaboana
Ahoana ny fomba hanamboarana sira ao anaty koba?
Women's Long Waistcoats 2016
Ny zanany vavy Donald Trump dia manantena ny zaza fahatelo
Biskuit miaraka amin'ny tsaramaso
Jiro amin'ny perla
Mijanona ambany ny tsy fandriampahalemana
Vokatra ho an'ny vehivavy bevohoka izay misy kalesy
Kim Kardashian dia manala ny nify ho an'ny taolam-paty mendri-piderana ary mitafy volom-borona ho an'ny fatiantoka
Zara - fanangonana vaovao 2015
Fitafiana ho an'ny birao
Ahoana no hifehezana ny volom-borona?
Lentil - toetra mahasoa
Trends ny fararano-ririnina 2017-2018 - akanjo - inona no ho lamaody amin'ny vanim-potoana vaovao?
Toeram-pandriana misy ratra
Gazpacho - resipe
Ahoana ny fomba hanasana ny ranomainty amin'ny akanjo?
Ny tsy fisian'ny micronutrients - famantarana
Ny fitaratra amin'ny voatabia - ahoana no hiady?
Diminatrama ho an'ny tarehy
Ny Duke and Duchess of Cambridge dia namoaka ny sarin'ny zanany vavy iray taona